Xiliga Away 2: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Taxanahan! - Madadaalo
Xiliga Away 2: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Taxanahan!
Goorma ayaa xilli-ciyaareedka labaad ee Away laga daawan doonaa Netflix?
Yaa ku jiri doona xilli Away labo?
Maxaa dhici doona xilliga Away labo?
Away, oo ay jileyso Hilary Swank, ayaa laga sii daayay Netflix horraantii Sebtembar waxayna horey u yeelatay caado soo socota. Xataa marka la eego masiibada jirta ee sababtay qoysaska inay dareemaan go'doon iyo cidlo, xisaabta Away ee safarkii ugu horreeyay ee Mars ayaa dareemaya sharafnimo, iyo wadnaha Away waa Swank's Emma, ​​sarkaalka taliyaha markabka. Bandhigan ayaa waxaa ka mid ah Emma oo ka go’aysa ninkeeda, kaas oo ay haysato xaalad caafimaad oo halis ah.
Xiliga labaad ee Away ayaa durba kiciyay xiisaha taageerayaasha, kuwaas oo u heellan inay wax badan ka bartaan Emma, ​​qoyskeeda, iyo inta kale ee shaqaalaha Away marka xilli ciyaareedka ugu horreeya uu soo dhawaado. Sababtoo ah sidoo kale waa sheeko qoys, Away waxay ka taagan tahay bandhigyada sci-fi ee kale. Waxaa jira laba muuqaal oo riwaayado ah (daadisyo kiimiko ah oo ka qarxa kubbadaha dabka!), Iyo melodrama casiir leh oo daawadayaasha ku ilaalinaya inay dib ugu noqdaan Tani Waa Annaga toddobaad kasta. Qaybtii kowaad Matt (Josh Charles) waxaa ku dhacay istaroog, iyo dhamaadka xilli ciyaareedka, Ram (Ray Panthaki) wuxuu qirtay inuu jacayl u qabo. Iyadoo kooxdu ay ku jirto dhowr bilood oo keliya tacabur saddex sano ah, tani waa wax badan oo la maarayn karo.
In kasta oo Netflix uusan wali si rasmi ah u iftiimin howlgalka xiga ee shaqaalaha, xilli labaad ayaa u muuqda mid macquul ah. Wax kasta oo aan ilaa hadda ognahay oo ku saabsan xilli labaad ee Away ayaa lagu daray hoos.
Xilliga labaad ee Away, haddii Netflix uu go'aansado inuu siiyo iftiinka cagaaran, lama filayo inuu bilaabo illaa dhammaadka 2021 ugu horreyn. Arrin kale ayaa ah faafitaanka coronavirus ee socda, kaasoo adkeynaya wax soo saar kasta inuu ku soo laabto shaqada isagoo aan khatar gelinin faafitaanka fayraska laftiisa. Qayb kale oo ka mid ah horumarinta bandhigga oo sababi karta dib u dhac ku yimaada xilliga labaad waa tirada weyn ee saameynta gaarka ah ee loo baahan yahay si loo abuuro jawi bannaan oo la aamini karo.
Way adagtahay in si dhaqsiyo leh loo toogto bandhiga iyada oo aan la hurin dareenka gaarka ah ee bandhigga labadan dhinac dartood. Si kastaba ha noqotee, soo-saaraha fulinta Andrew Hinderaker ayaa soo bandhigay sheeko-xilli-xilliyeedka sheeko-xilliyeedka bandhigga, markaa sugitaanku wuxuu noqon doonaa mid u qalma. Sida laga soo xigtay wareysi uu siiyey The Cap Times in uu siiyey daabacaadda, Laga bilaabo bilowgii, waxaan rabnaa in aan bilowno oo xidho xilli-ciyaareed ugu horeysay si la mid ah. Haddaba waa maxay sababta Away? Sababtoo ah waxaan rabnay inaan aragno waxa dhaca marka ay ku noqdaan noloshooda caadiga ah.
Hinderaker wuxuu u muuqdaa inuu isku diyaarinayo Away inuu ku dhawaado wakhti dheer hadda kooxdu waxay soo degtay Mars.
Dhammaan shanta cirbixiyeentu waxay ku soo mareen hawshooda Mars inkasta oo ay jireen dib u dhacyo, oo ay ku jiraan indho la'aan meel bannaan, mono, iyo arrimo la xiriira biyaha. Xilliga labaad waa inuu lahaadaa Emma, ​​Ram, Misha (Mark Ivanir), Dr. Kwesi (Ato Essandoh), iyo Dr. Lu (Vivian Wu) maadaama aysan jirin meel kale oo ay ku galaan meel bannaan.
Dib u soo kabashada Lex (Talitha Bateman), Matt iyo Emma gabadhiisa qaan-gaarka ah, iyo jacaylkiisa joogtada ah ee daryeelihiisa Melissa (Monique Gabriela Curnen), taageerayaashu waxay filan karaan inay arkaan wax badan oo ka mid ah jilayaashan.
Inkasta oo jilayaasha cusub aan weli la soo bandhigin, showrunner Jessica Goldberg ayaa u sheegtay Inverse in ay xiisaynayso sahaminta tartanka boosaska gaarka loo leeyahay xilli suurtagal ah laba, taas oo soo jeedinaysa in laga yaabo inaan fileyno inaan dhawaan la kulanno jilayaal cusub.
Iskaashiga caalamiga ah lama arag sannado badan xilli ciyaareedkii ugu horreeyay, waxayna ka warqabtaa in qaybta gaarka loo leeyahay ay tahay halka horumarka ugu xiisaha badan ee duulimaadka hawada sare uu dhaco.
Goldberg wuxuu yiri, waxaan aaminsanahay inay taasi tahay sheeko aad muhiim u ah. Waxaan aaminsanahay inay fiicnaan lahayd haddii aan keeni karno lacagtaas gaarka ah sababtoo ah hadda meel fog ma aadi karno la'aanteed. Elon Musk ee SpaceX, tusaale ahaan, waxay noqon kartaa dabeecad cusub oo lagu daro isku dhafka haddii qaybta ganacsiga lagu daro.
Hadafka ugu weyn ee cirbixiyeenada ee xilli ciyaareedka labaad wuxuu noqon doonaa in la abuuro saldhig Mars. Muddo ka badan hal sano, shantan cirbixiyeen waxay ku noolaan doonaan oo ka wada shaqayn doonaan meeraha ka hor intaysan bilaabin safarka dhibka badan ee dib ugu noqoshada dhulka. Xilligii koowaad, Ram wuxuu ku dhawaaqay shucuurtiisa Emma, ​​tanina waxay mar hore kicisay khilaaf u dhexeeya labada.
Waa aaminsanaanta adag ee Panthaki in tani ay tahay kaliya bilawga sheekada. Sida laga soo xigtay waraysi uu siiyey NME, Waxa uu haystaa gaashaan, oo ay qaadan doonto xoog badan si looga saaro. Shakhsigaasi wuxuu heli doonaa dhammaan haddii aad isaga ka go'do. Natiijo ahaan, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida wax walba u noqdaan.
Dhanka kale, Emma ninkeeda Matt waxa uu la halgamaya ogolaanshaha degdega ah ee Melissa ee dareenkeeda isaga oo ku soo laabtay gurigooda gurigooda. Xiriirka fog ee lammaanaha ayaa laga yaabaa inuu sii xumaado xitaa haddii labadan arrimood ay isku mar joogaan.
Goldberg waxa kale oo uu xiisaynayaa waxa ay kooxdu ka ogaatay Mars, iyo sida daah-furkaasi u saamayn doono. Riwaayad Romantic ah gees ka gees. Iyada, rajada helitaanka nolosha Mars waa mid aad u xiiso badan, laakiin ha ku hayn neeftaada oo sug in ay noqoto mid dhab ah, socota, iyo shisheeyaha hadlaya, sida ay u sheegtay Inverse. Waxay tidhi, markaan nolosha idhaahdo, waxaan ula jeedaa sida microorganism oo kale, oo ay ula jeedo macnaha ugu ballaaran. Uma jeedo shisheeye, bandhiggu sidaas kuma socon doono.
Xilliga labaad ee Away wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo lagu daboolo, laga bilaabo horumarka sayniska ilaa khilaafka guurka. Hadda oo Netflix ay si rasmi ah u soo bandhigtay bandhigga, qorayaashu waxay bilaabi karaan inay maskaxda ku hayaan masiibooyinka cusub ee meel bannaan si ay noogu argagaxaan.
Sidee Loo Helaa Qiime Dhimista Ardayda ee CBS?
Tirakoobka iyo Xaqiiqooyinka Ku Saabsan Naadiga SQM!
amazon prime student ma shaqeynayo
sida loo daawado dhacdooyinka tv -ga online -ka ah oo lacag la’aan ah
overwatch platform cross ps4 pc
sida loo joojiyo tijaabada bilaashka ah ee nordvpn
filimaan cusub oo lacag la'aan ah si aad hadda uga daawato internetka